People (လူမှုရေး) - မြန်မာနက် လမ်းညွှန်
There are 6763 listings and 449 categories in our website
Food & Cooking (ချက်ပြုတ်နည်း) (0/7)
Others (အခြား) (0/5)
Personal home pages/blogs (ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ) (0/28)
ဂုဏ်ထူးဆောင် ဘွဲ့တံဆိပ် အမျိုးအစားများ (0/7)
တပ်မတော်သားများ (ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်း ပေးလှူခဲ့သူများ) (0/0)
တပ်မတော်သားများ (ဂုဏ်ထူးဆောင် ဘွဲ့ရ) (0/0)
တပ်မတော်သားများ (အသက်ကို ပေးလှူခဲ့သူများ) (0/0)
တပ်မတော်သားများ (အောင်ဆန်း သူရိယ ဘွဲ့ရ) (0/6)
ဒီမိုကရေစီအတွက် ထောင်ကျခဲ့ရသူများ (0/1)
ဒီမိုကရေစီအတွက် သေဆုံး/ပျောက်ဆုံး ခဲ့သူများ (0/1)
နိုင်ငံ့ဂုဏ်ရည် ဆုရှင်များ (0/1)
ပိဋကတ် အာဂုံဆောင် နိုင်သူများ (0/5)
လွတ်လပ်ရေး မော်ကွန်းဝင်များ (0/2)
အားကစား ချန်ပီယံများ (နိုင်ငံတကာအဆင့်) (0/10)
အားကစား ချန်ပီယံများ (ပြည်ထောင်စုအဆင့်) (0/0)
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း1
Burma VJ (video journal) New!
Matter Documentary Award at the Branchage
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း4
အောင်လှိုင်မြင့်၊ စိုင်း New!
၁၉၇၆ ခုနှစ်က မြစ်ကြီးနားမြို့ တဖက်ကမ်း ခတ်ချိုကျေးရွာ ကူးတို့ဆိပ်တွင် အင်ဂျင်နီယာတပ်မှ မော်တော်ယာဉ် တစင်း ဖောင်ပေါ် အတက်၌ ဘရိတ်ချော်ပြီး ရေထဲ ကျသွားသည်။ အမှတ်မထင် ဖြစ်ပျက်မှုကြောင့် အံ့အားသင့် နေကြစဉ် စိုင်းအောင်လှိုင်မြင့်က ကားထဲတွင် ပါသွားသော ရဲဘော် ခင်မောင်အေးအား မိနစ် ၂၀ ကြာ ရေငုပ်ရင်း သက်စွန့်ဆံဖျား ကယ်တင်ခဲ့သည်။ ဤသို့သော စွန့်စား စွမ်းဆောင်ခဲ့မှုကြောင့်ပင် စိုင်းအောင်လှိုင်မြင့်အား ကမ္ဘာ့ ကြက်ခြေနီ အဖွဲ့က ဟင်နရီဒူးနန့်ဆု ပေးအပ် ချီးမြှင့်ခဲ့ပါသည်။ စိုင်းအောင်လှိုင်မြင့်သည် ၁၅ အောက်တိုဘာ ၁၉၇၇ တွင် ရူမေးနီးယားနိုင်ငံ ဘူခါရက်မြို့၌ ကျင်းပသော (၂၃) ကြိမ်မြောက် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ ကြက်ခြေနီ ညီလာခံတွင် ဆုတက်ရောက်ယူခွင့် ရရှိခဲ့၏။
လွတ်လပ်စွာအသင်းအပင်းဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်ရေးဆွဲရာတွင် ပါဝင်ရန် ACT ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များအတွက် ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ပေးနေသော စက်ရုံများသည် အလုပ်ရှင်လုပ်ငန်းအုပ်စုကို ၂၀၁၉ခုနှစ်တွင် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ဤလမ်းညွှန်ချက်တွင် ထည့်သွင်းမည့် အကြောင်းအရာများအား စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရန် ထိုလုပ်ငန်းအုပ်စုသည် ကိုယ်စားလှယ်များကို ရွေးချယ်ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ ထိုကိုယ်စားလှယ်များသည် မြန်မာနိုင်ငံကုန်ထုတ်နှင့်စက်မှုလက်မှုအလုပ်သမားများအဖွဲ့ချုပ် (IWFM)နှင့် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းခဲ့ကြသည်။ IWFMသည် လုပ်ငန်းကဏ္ဍအဆင့် အလုပ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ်ဖြစ်ပြီး အထည်ချုပ်နှင့် ခြေဝတ်ပစ္စည်းအလုပ်သမားများကို ကိုယ်စားပြုသည်။ IWFMသည် IndustriALL ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသမဂ္ဂတွင် အသင်းဝင်ထားသည်။ ဤစေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုတွင် စက်ရုံများနှင့် အလုပ်သမားသမဂ္ဂများအတွက် ILOနှင့် GIZတို့က နည်းပညာအထောက်အကူများဖြင့် အကူအညီပေးသည်။
MYANPWEL - မြန်ပွဲ
လိုချင်တဲ့ပွဲလက်မှတ်တွေကို မျက်စိတမှိတ်အတွင်း ဝယ်ဖို့အတွက် MYANPWEL MESSENGER BOT ရှိတယ်
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း54
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း3
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း37
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း99
Mandalay Region Chamber of Commerce and ...
Corner of 78th Road and 34th Street, Fourth floor of Yadanabon Super Center, Mandalay.
Tel:	(95) 02-69326, 09-6800953
Fax:	(95) 02-69331
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း81
No. 19, Baho Road
Shor Phee Housing
Hlaing Tsp, Yangon, Myanmar (Across from Kamayut Train Station)
Phone: (+95) 9261003798
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း199
Myanmar Cupid Community
စိတ်ဝင်စားဖွယ် မြန်မာ ကွန်ယက် ြဖစ်ပါသည်
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း549
Myanmar Cultures Blog
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း187
ဌာနေ မြန်မာများ ဆွေးနွေးခန်း
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း493
No.3(A) Corner of Waizayandar Road & Thanthumar Road, Thuwunna, Thingangyun, Yangon, Myanmar.
No.182(B), Dhammazedi Road, Bahan.
+95-9-425277760, +95-9-420287941, +95-9-5070952
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း458
3rd Floor, Salomon Business Centre
No.224(A), UWisara Road, Bahan Township,
Tel: +95-1-536333, 535611 Ext: 402 / 536428
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း344
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း1,350
Doe Myanmar social network
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း861
ကျနော့်ရဲ့ www.natthamee.net မှာ မြန်မာမော်ဒယ်မယ်လေးများရဲ့ အလှဓါတ်ပုံများကို စုဆောင်းတင်ပြထားပါတယ်။ ဓါတ်ပုံလှလှလေးတွေကို ကွာလတီကောင်းကောင်းနဲ့ အလွယ်တကူရှာဖွေ ကြည့်ရှုနိုင်ကြဖို့ စီစဉ်ထားတဲ့အပြင် ဓါတ်ပုံအသစ်များကို အလျဉ်းသင့်သလို ပုံမှန်တင်ပေးသွားမှာပါ။
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း709
Myanmar Peace Monitor isaproject run by the Burma News International that works to support communication and understanding in the current efforts for peace and reconciliation in Myanmar. It aims to centralize information, track and make sense of the many events and stakeholders involved in the complex and multifaceted peace process.
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း395
Welcome to ResponsibleMyanmar.Org. This website aims to raise awareness about responsible and sustainable development in Myanmar in the fields of tourism, business and investment, education, health care and other areas
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း446
Voice of Golden Land
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း385
ဝါသနာတူ သူငယ်ချင်းများ အတွက် နည်းပညာ ဝဗ်ဆိုက်
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း682
Food & Cooking (ချက်ပြုတ်နည်း) (7)
Others (အခြား) (5)
Personal home pages/blogs (ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ) (28)
ဂုဏ်ထူးဆောင် ဘွဲ့တံဆိပ် အမျိုးအစားများ (7)
တပ်မတော်သားများ (ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်း ပေးလှူခဲ့သူများ) (0)
တပ်မတော်သားများ (ဂုဏ်ထူးဆောင် ဘွဲ့ရ) (0)
တပ်မတော်သားများ (အသက်ကို ပေးလှူခဲ့သူများ) (0)
တပ်မတော်သားများ (အောင်ဆန်း သူရိယ ဘွဲ့ရ) (6)
ဒီမိုကရေစီအတွက် ထောင်ကျခဲ့ရသူများ (1)
ဒီမိုကရေစီအတွက် သေဆုံး/ပျောက်ဆုံး ခဲ့သူများ (1)
နိုင်ငံ့ဂုဏ်ရည် ဆုရှင်များ (1)
ပိဋကတ် အာဂုံဆောင် နိုင်သူများ (5)
လွတ်လပ်ရေး မော်ကွန်းဝင်များ (2)
အားကစား ချန်ပီယံများ (နိုင်ငံတကာအဆင့်) (10)
အားကစား ချန်ပီယံများ (ပြည်ထောင်စုအဆင့်) (0)